Mac Format Iweghachite - Olee otú naghachi Mac faịlụ mgbe formatting
> Resource> Mac> Olee naghachi Mac Files mgbe Formatting Macintosh HD
Ọ ga-agbake Mac faịlụ mgbe formatting?
Azịza bụ maa EE! N'ezie, disk formatting adịghị ehichapụkwa gị faịlụ (ma ọ bụrụ na faịlụ na-overwritten site ndị ọzọ faịlụ). Mgbe ị na-Ọkpụkpọ a Macintosh HD, faịlụ usoro disk na-dochie na ọhụrụ efu faịlụ usoro. N'ihi ya, Ndenye nke niile faịlụ na directories zọpụta na mbanye na-kpochara nke mere na ha na-na na keerughi. Otú ọ dị, disk ekwusi ndeksi faịlụ, na-agwa sistemụ arụmọrụ kọmputa na ebe a akpan akpan faịlụ na-echekwara. Mgbe ị na-usoro ike mbanye, njikọ dị n'etiti index na faịlụ na-ehichapụ. Ndị furu efu faịlụ ndị ka na-n'ụzọ anụ ahụ na-emebibeghị, na i nwere ike weghachi formatted faịlụ site na Mac tupu ha na-overwritten site ọhụrụ faịlụ.
Olee otú naghachi formatted diski ike na Mac
Ebe ọ bụ na ọ bụ omume na-agbake formatted faịlụ na Mac, otú naghachi Mac faịlụ n'ezie mgbagwoju anya ụfọdụ Mac ọrụ. Na nkenke, e nwere ụzọ abụọ: Weghachi na-agbake.
Ọ bụrụ na ị kwadoo gị Mac faịlụ, ị nwere ike weghachi formatted faịlụ mfe si ndabere faịlụ. Ọ bụrụ na ị na-adịghị ihe ọ bụla irè ndabere, i kwesịrị Mac format mgbake software - Wondershare Data Recovery for Mac, naghachi formatted faịlụ site na Mac. Wondershare Data Recovery for Mac-Enyere gị aka ime ya, n'agbanyeghị formatted, ehichapụ ọ bụ furu efu faịlụ ruru iche iche ihe.
Atụmatụ: Remeber ghara wụnye Wondershare Data Recovery na otu nkebi ma ọ bụ ebe ị furu efu gị data iji zere si overwriting gị mbụ data.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na Windows onye ọrụ, ịgbanwee gaa na Wondershare Data Recovery maka Windows.
Step1. Họrọ nhọrọ nke "Raw Iweghachite"
Wụnye na-agba ọsọ a data mgbake na gị Mac mgbe nbudata ya. Naghachi formatted faịlụ site na gị Mac HD, i kwesịrị họrọ "Raw Iweghachite", nke na-akwado mgbake nke fọrọ nke nta niile furu efu faịlụ.
Step2. Họrọ Macintosh HD mgbake
Họrọ Macintosh HD na ị formatted mmadụ na mberede, na pịa "iṅomi" na-chọpụta niile furu efu faịlụ.
Ọ bụrụ na ị na-achọghị ka chọpụta niile faịlụ (ịgụ isiokwu faịlụ niile ga-ewe gị oge), i nwere ike iji "iyo Nhọrọ" ndimek faịlụ ụdị na ị chọrọ na-azụ. Mgbe ahụ na-aga "iṅomi".
Step3. Malite naghachi formatted faịlụ site na Mac
Mgbe scanning completes, ị nwere ike ihuchalu scanning results na ego ndị faịlụ dị gị mkpa maka mgbake.
Video nkuzi nke Mac formatted ike mbanye mgbake
Gịnị mere mkpa Ọkpụkpọ Macintosh HD?
E nwere wuru na-ngwá ọrụ aha ya bụ Disk Utility na Mac nke-enye gị ịrụ ndị format usoro site ọkụkụ na "ihichapu" taabụ mgbe ikwu na disk ma ọ bụ olu. Formatting nwere ike idozi ụfọdụ nke ike mbanye metụtara ezi uche nsogbu, kamakwa ihichapu niile zọpụta faịlụ na nchekwa na Macintosh HD, otú na-emekarị ị ghara Ọkpụkpọ Macintosh HD. Formatting bụ naanị rụrụ maka gị ụfọdụ nzube, dị ka:
• Iji wepu a na-egbu egbu virus, nke ọbụna nwere ike ghara sụrụ na ihe mgbochi-virus software.
• reinstall sistemụ idozi buut njehie ma ọ bụ weghachi efu usoro faịlụ.
• Dochie mebiri emebi faịlụ ma ọ bụ usoro Macintosh HD owuwu.
• Doro Anya niile data na ị na-achọghị si Mac.